Lamasu Wellness & Resorts Loft Standards
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguCristina
Ifakwe ngokucokisekileyo kwisitayile sanamhlanje esinezixhobo eziqinisekisiweyo zendalo, ukusuka emgangathweni ukuya kumalaphu, inegumbi lokulala eliphindwe kabini, indawo yokuhlala enebhedi yesofa kunye nekhitshi, igumbi lokuhlambela. I-air conditioning kunye nokufudumeza, i-WiFi, i-TV yesathelayithi, indawo yokupaka yabucala, igadi encinci yabucala kunye neveranda. Akukho mnyango kwigumbi lokulala
ILoft esemgangathweni yinxalenye yeLamasu Wellness & Resort, indawo yokuhlala enamagumbi ali-11.
I-Solarium ixhotyiswe nge-infinity pool (ifakwe kwixabiso), i-sauna kunye ne-whirlpool (iinkonzo ezihlawulwayo zokusetyenziswa okukodwa €. 50), i-beautician kunye nenkonzo ye-massage (inkonzo ehlawulwayo), ukuhlawulisa iimoto zombane. Ecaleni kwendawo yokuhlala, indawo yokutyela yaseRioverde inikezela ngezona zitya eziphambili ze-Garda cuisine kunye nevumba elimnandi "enziwe eItali" pizza. Ngolawulo lwayo losapho, ibonelela ngekhefu elimnandi nelimnandi lokuhlaziyeka, egameni lesithethe sendawo ye-gastronomic kunye nokhathalelo oluphezulu lwemathiriyeli ekrwada evela kwindawo. Ukusuka kwioli ukuya kwiitshizi, ukusuka kwiziqhamo ukuya kwiiwayini, ngaphandle kokulibala ngokucacileyo intlanzi, kwindawo yokutyela yaseRioverde unokonwabela iimveliso ezikhethiweyo kakhulu, ukufumanisa izibiliboco ezichanekileyo zeLake Garda kunye neendawo ezingqongileyo.
Ngaphaya koko, le ndawo yokuhlala ikwindawo ecwangcisiweyo yokufumanisa umtsalane wechibi kunye ne-hinterland yalo kulo lonke ixesha lonyaka: ukusuka kwimfihlakalo yemiqolomba yeCatullus ukuya kwipaki yendalo yaseRocca di Manerba, ukusuka kwimbali yeVittoriale degli Italiani iindlela zobugcisa kunye, kutheni kungenjalo, ukuba ezivenkileni e Verona kunye Mantua, ukuze sibethwe ngumoya ezinqwenelekayo, nokuba ebusuku, ukuya Desenzano kunye entla.
Kwanabadlali bezemidlalo, i-Garda igcine imisebenzi efanelekileyo kuyo yonke iminyaka kunye nayo yonke into ekhethwayo: ukusuka kwiibhayisikile ezingenakubalwa okanye iindlela zokuhamba, ukusuka kwigalufa ukuya kwisikhephe.
Abasebenzi bendawo yokuhlala yaseRio Verde / Lamasu bahlala befumaneka kwiindwendwe kwiimfuno okanye ukulungiselela uhambo, ukhenketho kunye nemisebenzi yokuzonwabisa kunye nenkcubeko yazo zonke iintlobo.
Inombolo yomthetho: 017171 - RTA 0002